Nweta site na COVID-19? Ikwesiri Ilegide Anya nke oma Mgbe Ihapu - Ahụike
Nweta site na COVID-19? Ikwesiri ịkpachara anya mgbe ịpụsịrị
Ọrịa oria COVID-19 emetọla ụwa nke ọma, ebe ndị ọrịa na-ebute ọrịa ahụ, na-ebute nsogbu dị ka mmebi ahụ, yana ịnọrọ ogologo oge na ICU tupu ha agbakee.
Otu nnyocha e mere na showedtali gosiri ihe karịrị 87.4 pasent nke ndị ọrịa, bụ ndị gbakere na COVID-19, na-ekwusi ike na ọ dịkarịa ala otu mgbaàmà, karịsịa ike ọgwụgwụ na dyspnoea (ume iku ume) nke a kọọrọ ọbụna mgbe ọnwa abụọ gachara ịhapụ ụlọ ọgwụ!
A ga-ebugharị ụfọdụ ndị ọrịa gbakere n'ọrịa COVID-19 na ọkwa ikuku oxygen dị ala naanị otu ụbọchị mgbe ha gbasasịrị! Ndị ọrịa a laghachiri n'ọtụtụ ọrịa nke ngụgụ - site na fibrosis (nhazi nke anụ ahụ siri ike dịka akpa ume na-agwọ site na mmerụ ahụ) na ọrịa nke abụọ na oyi baa. Achọpụtakwara na mgbe ha gbakechara site na COVID-19, ụfọdụ ndị ọrịa na-alọta na belatara ọrụ obi, nkụchi obi ma ọ bụ ọbụna ọrịa strok.
nkịta na-enweghị ntutu isi
A maara COVID-19 ịwakpo emkpụrụ ndụ ndothelial nke na-agbanye arịa ọbara, na-eduga na ịmịnye ọbara gabiga ókè n'ahụ. Ugbu a ọrịa a nọrọla na mba ruo ọtụtụ ọnwa, ma anyị ghọtara ya nke ọma, anyị kwesịrị ịmalite ileba anya na mmezigharị post-COVID, nke ghọrọ ihe kwesịrị. A na-akpọ mmetụta a dị mkpụmkpụ na ogologo oge nke COVID-19 'Post COVID Syndrome'. Nke a pụtara, mgbe nnukwu akụkụ nke COVID-19 gafere, ndị ọrịa na-abịaghachi n'ụlọ ọgwụ nwere mgbaàmà dịka ike ọgwụgwụ, ahụ mgbu na akpịrị na-ama jijiji ọbụna izu anọ ma ọ bụ isii ka e mesịrị. A na-ahụkwa ndị ọrịa nwere mmetụta mmụọ nke ọrịa ahụ, na-eduga na nchekasị na ịda mba. Ọ dị ezigbo mkpa iji nyochaa ikpe ndị dị otú ahụ, ma tinye usoro nhazigharị kwesịrị ekwesị mgbe a nwụsịrị, iji nyochaa ahụike onye ọrịa, ya mere enwere ike ịme ihe n'oge.
Kedu ihe kpatara ndị ọrịa ji arịa ọrịa post-COVID?
Ogologo nsogbu post-COVID ga-adabere na njedebe na mmetụta nke ọrịa onye ọrịa ahụ tara. Ihe ndị ọzọ dịka ị smokingụ sịga, ịka nká na ọnọdụ ndị na-adịghị mma dịka ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, nsogbu akụrụ na-abanyekwa na foto a, nke na-eme ka mmeghachi omume nke ndị ọrịa belata.
kọwaa ihe ndị metụtara ahụ ike
Menmụ nwoke na Womenmụ Nwanyị Hà Na-akọ Otu Okwu Ahụ Mgbe Mwepụgasịrị?
Ee, mana enwere ike ịrịa ọrịa post-COVID karịa ụmụ nwoke ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwanyị.
Gini bu ihe nlere nke kachasi nke COVID-19 Ndi lanarịrị Mkpa Iji Gha?
Nyocha kwa ụbọchị nke ikuku oxygen, ọ kwesịrị ịnọgide na> 94% na ikuku ụlọ.
Lelee maka mgbaàmà iku ume dịka nnọgidesi ike ma ọ bụ njọ nke mgbaàmà dịka ụkwara na iku ume.
Mbilite na-adịgide adịgide nke okpomọkụ ahụ karịa 100' ?? F.
Lelee maka ihe ịrịba ama nke ike ọgwụgwụ, ụra, na ntụgharị uche na-agbanwe.
Ọ dị mkpa ilebara shuga shuga anya na ndị ọrịa maara ọrịa mamịrị. Ọrịa COVID (dịka ọrịa ọ bụla) na-agbanwe ogo shuga nke ahụ. Nlekọta nlebara anya otu ugboro n'ime ụbọchị atọ na ịgakwuru dọkịta gị mgbe niile ka achọrọ.
Mgbe nile ọbara mgbali nlekota mara mara Hypertensive ọrịa a chọrọ iji zere accelerated ọbara mgbali metụtara nsogbu. Idozi ọbara mgbali kwa izu ma ọ bụrụ na ọ na-arịa ọbara mgbali elu a na-achịkwa, ma ọ bụ karịa karịa mgbe a na-agụ agụ ndị na-adịghị mma.
Soro dọkịta gị soro ụbọchị asaa gafere.
Nnyocha ọbara dị ka CBC, CRP na nsonye mbụ, yana usoro ndị na-esote, ma ọ bụrụ na dọkịta gị gwara gị.
Tinyegharịa CT scan nke obi mgbe ọnwa atọ gasịrị iji lelee ogo nke mgbake na-etinye ọrịa COVID.
Gịnị Ga-eme Ma Ọ Bụrụ na I Kwuchaa Ihe Ndị Ahụ?
Ndị ọrịa nwere ike banye 'Cytokine Storm', ebe mkpụrụ ndụ na-alụ ọgụ na-asọ ma na-awakpo ngụgụ ha kwesịrị ichebe n'ezie!
Akụkụ ọbara nwere ike ihihi mmiri, ma ọ bụ ọbara na-amalite ịgba.
Mbara ọbara nwere ike ịda ma akụkụ ahụ nwere ike ịmalite ịda.
Nsogbu nke abụọ bụ ihe a na-ahụkarị na ọrịa COVID dị ka fibrosis, pulmonary embolism, akụrụ akụrụ, mmeju imeju, coagulopathy (ọbara ọgbụgba ma ọ bụ mkpụkọ), ọrịa strok, na infarction myocardial.
Ikpe nke ụfọdụ ndị ọrịa na Post COVID-19 Oge
Otu nwoke dị afọ, onye na-esote post-COVID, gosipụtara anyị mkpesa nke mgbu na ọzịza na ụkwụ aka ekpe ya. Achọpụtara na ọ nwere Deep Vein Thrombosis (DVT) - ọnọdụ na - eme ka mkpụkọ ụkwụ na - agbagharị ụkwụ, n'agbanyeghị na ọ na - ebu ọbara! Nke a bụ ihe mgbagwoju anya COVID ma chọọ ka edozi ya n'oge.
Otu agadi nwoke, nke a maara na ọ na-arịa ọbara mgbali elu na ọrịa shuga, gosipụtara anyị otu ọnwa mgbe emesịrị ya mkpesa nke iku ume na ụkwara na-aga n'ihu. Nnyocha CT nke obi ya gosiri na ọ bụ eriri afọ. A ghaghị itinye onye ọrịa ahụ na nkwado oxygen ogologo oge n'ihi nkwenye na-adịghị mma, ọ na-emezi nke ọma ugbu a.
Onye na-eto eto na-arịa ọrịa laghachiri na ụlọ mberede naanị otu ụbọchị mgbe a tọhapụsịrị ya mgbe ọ gwụsịrị ọgwụgwọ COVID, na mberede nke nhụjuanya na enweghị ike, na-akpata ọbara mgbali elu. Achọpụtara onye ọrịa ahụ na nnukwu psychosis, nke bụ ihe mgbagwoju anya nke ọrịa post-viral.
Ọzọkwa Gụọ: India weputara Drive COVID-19 Vaccination Drive
ọnụego kacha mma na afọ ọhụrụ
na-egosi dị ka egwuregwu nke ocheeze
edozi isi ọkachamara maka ntutu isi
kasị mma ịhụnanya Hollywood fim
achicha echiche nke ụmụaka
ezinụlọ ihe nkiri nkiri 2017